Manu DiBango Matin’ny Coronavirus
Praiminisitra Etiopiana Mitaky 150 miliara dolara ho an`i Afrika
Omaly dia niantso ny G20 na ny vondron` ireo firenena 20 matanjaka indrindra maneran-tany ny praiminisitra Etiopiana, Abiy Ahmed ny mba hanohanana ny toekarena Afrikanina izay miha marefo amin` izao fihanaky ny Covid-19 izao.
Ady amin’ny Coronavirus Nogiazan’i Italia ireo fitaovam-pisefoana 1840 tokony ho an`i Grèce
Nanambara ny manampahefana ao Italia fa hamehana ny COVID-19 ao aminy ka nisy fanagiazana fitaovam-pisefoana (circuits respiratoires) miisa 1840, izay tsy maintsy ampiasaina ho an` ireo marary voan` ity aretina ity.
Dr Razafindranazy Jean-Jacques Naniry ny halevina araka ny fomban-drazana aty Madagasikara
Malagasy voalohany, nindaosin’ny fahafatesana noho ny “coronavirus” tany Frantsa ny dokotera Razafindranazy Jean-Jacques, izay mpitsabo tao amin` ny hopitalin’i Compiègne, departemantan’i Oise, Faritra Hauts-de-France.
CHINE Misy valan’aretina vaovao indray
Raha toa ka nambaran-dry zareo Sinoa fa efa voafehy ny Coronavirus dia toa tsy mbola tafavoaka ny ala izy ireo satria fantatra fa nisy lehilahy iray matin’ny otrik’aretina iray vaovao indray antsoina hoe Hantavirus.
Fahamaizan’ny Notre Dame de Paris Misy ambadika politika ?
Hatairana ny an'ny mponina tao Parisy, renivohitra Frantsay omaly hariva raha nahita ny fiangonana Notre Dame de Paris may. Nahitana lelafo nivoaka tamin'ny tafo antsoina hoe"comble". Teo amin'ilay tilikambo (Grande Rosace) mirefy 93 metatra no nanombohan'ny afo. Sarotra ny namono sy nifehy ny afo satria somary tery ny lalana sady eo afovoan'ny tanàna mihitsy. Mahery rahateo ny rivotra ka sarotra ho an' ireo mpamonjy voina ny nifehy ny afo.
Mpanakanto zokiolona, mpitsoka saxophone nikoizana, nanabevoho ny tontolon` ny mozika eran-tany. Nodimandry teo amin`ny faha-86 taonany, omaly maraina, tao Parisy Frantsa i Emmanuel N'Djoké Dibango na Manu Dibango.
Ity mpanakanto teratany camerounais ity dia anisan` ireo voamarina fa nitondra ny tsimok`aretina Covid 19 ka naharaikitra azy teo am-pandriana. Niharatsy hatrany ny toe-pahasalamany izany tao anatin` ny andro vitsivitsy ka nitondra azy ho amin` izao fahafatesana izao. Nahafantarana an` i Manu DiBango teo amin` ny sehatry ny mozika ny fanehoany ny fahaizana manokana ny “saxophone”. "Soul Makossa", no sangan`asany tena nahafantaran` izao tontolo izao azy. Lasa hira faneva ho an` ny ekipam-pirenena tao Cameroun izany nandritra ireo fiadiana ny amboara baolina kitra aty Afrika (CAN). Taty aoriana kely dia ireo mpitsirika talenta “new-yorkais” no nampalaza azy. Na ilay hira “Thriller”an` i Mickael Jackson aza dia voalaza fa azy. Voapanga nangalatra ny hirany ilay mpanakanto amerikanina ary nisy mihitsy fifanarahana ara-barotra teo amin`ny mpanakanto roa tonta. Maro ireo maribonihahitra manaporofo ny maha andrarezina azy eo amin` ny sehatry ny Mozika.